काठमाडौँ, ८ असोज । पछिल्ला केही दिनयता नेपाली बजारमा पहेँलो धातुको मूल्यमा लगातार गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबारदेखि सुनको भाउ निरन्तर ओरालो लागेको छ । सोमबार प्रतितोला रु ९७ हजार २०० मा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य मङ्गलबार प्रतितोला रु एक हजार ७००, बुधबार रु एक हजार २०० र आज […]
असोज ८, काठमाडौं । असोज लागेसँगै सुनको मूल्य ओरालो लाग्दै आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले तोकेको मूल्यअनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार तीन सय कायम भएको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य ९३ हजार आठ सय रुपियाँ कायम भएको छ । बुधबार बिहान नेपाली समयअनुसार १०ः३० बजे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य […]
इलाम, ६ असोज । लामो रस्साकस्सीपछि अब नेपाली अर्थोडक्स चिया आफ्नै व्यापारचिह्नसहित विश्वबजारमा जाने भएको छ । अहिलेसम्म निर्यातकर्ताले आआफ्नै उद्योगको व्यापारचिह्न प्रयोग गरेर निर्यात गरिरहेकामा अब भने सरकारले जारी गरेको ‘नेपाली टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालयज’ नामक व्यापारिकचिह्न लागेको तयारी चिया विश्व बजारमा जाने भएको छ । चियाको राजधानी’ इलामको फिक्कलमा आज सार्वजनिक गरिएपछि […]
काठमाडौँ, ६ असोज । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओरोलो लागेको छ । यो साताको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा नेप्से लगातार तल झरेको हो । सोही क्रममा आज नेप्से २२.९१ ले ओरोलो लागेर एक हजार ५४६.१५ मा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ४.८४ ले ओरोलो लागेर ३०७.३९ मा पुगेको छ […]
वीरगञ्ज, ६ असोज । तेस्रो मुलुकबाट सुक्खा बन्दरगाह हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने छोकडामा प्रतिबन्ध लगाएपछि साढे सात करोड मूल्य बराबरको ५० कन्टेनर छोकडा वीरगञ्जमा रोकिएको छ । नेपाल सरकारले चैत १६ गतेपछि आएको छोकडा नछोड्ने निर्देशन दिएपछि सो छोकडा बन्दरगाहमै अड्किएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियाका निर्मित प्रमुख जगदिश पुर्वेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यहाँले […]
काठमाडौँ, ५ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत शुरु गरेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ । कामपाले यही असोज एक गतेदेखि वडा नं २६ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्य शुरु गरेको थियो । सोही दिन वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ मा […]
किवानिज नेपाल गभर्नरमा व्यवसायी लम्साल
काठमाडौँ, ५ असोज । परोपकारी संस्था किवानिज इन्टरनेशनलको नेपाल डिस्टिकका गभर्नरमा पर्यटन व्यवसायी मोहन लम्साल निर्वाचित हुनुभएको छ । नेपाल डिस्टकको हालै सम्पन्न अधिवेशनले उहाँलाई सो पदमा एक वर्षका लागि निर्वाचित गरेको हो । बालबालिकाका क्षेत्रमा परोपकारी सेवा गर्दै आएको सो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विशेष गरी नेपालमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र वातारणको क्षेत्रमा मानवीय सेवा गर्दै […]
खस्यौली, २ असोज । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले युवालाई उत्पादनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन बिनाधितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन शुरु गरेको छ । स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेडसँगको सहकार्यमा प्रतिव्यक्ति बढीमा रु. चार लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न थालेको हो । पहिलो चरणमा रु दुई करोड कर्जा प्रवाह गर्ने गरी नगरपालिकाले युवासँग गत वैशाख २४ […]
दमौली, २ असोज । कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरका व्यवसायीको करोडौं लगानी जोखिममा परेको छ । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष–२०२० लाई लक्षित गरी होटल व्यवसायमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी बन्दीपुरमा नयाँ होटल निर्माण भएपनि लगत्तै भएको बन्दाबन्दीले व्यवसायी […]
काठमाडौँ, २ असोज । विहिवार ९६ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज तोलाको चार सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला ९७ हजार रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला १३ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । छापावाल सुनको मूल्य […]
कर्णाली, ३१ भदौ । नेपाल बैंकर्स सङ्घ कर्णाली प्रदेश एकाइ समिति गठन गरिएको छ । एभरेष्ट बैंक प्रदेश कार्यालय प्रमुख राजकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बैंकर्स सङ्घ कर्णाली एकाइ समिति गठन गरिएको हो । एकाइको सहसंयोजकमा ग्लोबल आइएमई बैंकका विष्णु अर्याल तथा सदस्यमा सिभिल बैंकका अभिजित श्रेष्ठ, सेन्चुरी बैंकका धर्मराज श्रेष्ठ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका […]
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, आज कति छ मूल्य ?
भदौ ३०, काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा ९६ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य मंगलबार बढेर ९७ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि सोमबार तोलामा १३२० रुपैयाँमा कारोबार […]
सिन्धुली, २९ भदौ । युवालाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउने उद्देश्यले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले ‘युवालाई सहुलियत व्यवसायिक ऋण कार्यक्रम’ ल्याएको छ । यो कर्जामा महिला ऋणीले १.८५ प्रतिशत र पुरुषले २.८५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सो ऋण प्रवाह गर्ने छन् । सो ऋण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्री […]
सुनको मूल्य निरन्तर वृद्धि, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ २५ भदौ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ । छापावाल सुन प्रतितोला ९६ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९६ हजार ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ । अघिल्लो दिन बुधबार सुन प्रतितोला ९६ हजार ४०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । त्यसैगरी चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले […]
ओखलढुङ्गा, २४ भदौ । यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि रु पाँच करोड ८८ लाख ३२ हजार ८२८ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बराबरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरेको हो । समितिले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना […]
बैंकका शाखा खुला राख्न निर्देशन
काठमाडौँ, २३ भदौ । कोभिड–१९ महामारीका कारण आन्तरिक उडानमा रहेका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले १६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी र जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा ती कम्पनीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका हुन् । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत […]
कञ्चनपुर, २३ भदौ । कञ्चनपुरका होटेल व्यवसायीलाई लगानी डुब्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् सिर्जित समस्याका कारण पर्यटनको मूल आधारका रुपमा रहेका होटल व्यवसायको कारोवार ठप्प रहेको छ । महिनौँसम्म होटल बन्द गर्नुपर्दा होटल व्यवसायी पेशा पलायन हुन थालेका छन् । सयौँ कामदारको रोजगारी गुमेको छ । कोरोनाले सिर्जित समस्याका कारण होटल […]
काठमाडौँ, २३ भदौ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले मुलुकभर बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका व्यवसायीलाई घरभाडा मिनाहा गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी झण्डै छ महिना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको भन्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा […]
होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको ३० अर्ब लगानी सङ्कटमा
चितवन, २२ भदौ । चितवन जिल्लास्थित होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको रु ३० अर्ब भन्दा बढी लगानी सङ्कटमा परेको छ । पर्यटकीय र सर्वसाधारणलाई सेवा दिँदै आएका जिल्लाका साना ठूला होटल रेष्टुरेन्ट कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द छन् । देशकै तेस्रो पर्यटकीय क्षेत्र सौराहासहित जिल्लाका एक हजार २५० होटल रेष्टरेन्ट गएको चैतयता बन्द […]